Ụbọchị My Pet » 9 AFỌ Onye ọ bụla Site San Francisco aga On
emelitere ikpeazụ: Aug. 07 2020 | 3 min agụ
Ndị mmadụ na San Francisco bụ ezigbo romantics; ha maara otú na-atụgharị a ụbọchị n'ime a zuru okè ụbọchị. Otú ọ dị, na ọtụtụ ebe ndị na-aga na a na ụbọchị na obodo, ọ bụ ike na-aga-ezighị ezi na gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị plan. The ngalaba dị n'okpuru okwu banyere itoolu ụbọchị ọ bụla dị na San Francisco akpụkpọ ụkwụ aga on.
1. A siri na Magic Bus SF
Magic Bus ga-ewe gị on a 90 nkeji psychedelic nlegharị anya njem nke San Francisco. N'oge a na-akpali akpali multimedia tour, ị ga-enweta na-agba àmà na ọtụtụ na-ekwu banyere hippie ọdịbendị na ọtụtụ ndị dị otú ahụ ndị ọzọ na facades nke 1960. The njem ga-enye gi na onye òtù ọlụlụ nza nke na-echeta na-ahụ n'anya.
2. Iburu ya gaa Ocean Beach
Ọ bụrụ na gị na onye òtù ọlụlụ bụ n'èzí enthusiast, ọ ga-maa a n'anya ebe. Ocean Beach-emi odude nso Golden State Park; oge ị ga-anọ ebe a ga-akpali akpali na fun-jupụta. -Akụkụ na ihe omume ndị dị otú ahụ dị ka efe efe a egbe, hiking, na biking; na mgbe ahụ na-eji ụfọdụ izuike awa ọnụ n'elu otu iko ọkacha mmasị gị mmanya.
3. Gaa na-akụ Azụ si ụgbọ mmiri ahụ dọ ka a nri ụtụtụ ụbọchị
Ọkụ azụ si ụgbọ mmiri ahụ dọ na-anọgide nnọọ mmadụ jupụtara na fọrọ nke nta niile site na ụbọchị; Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ijikwa ileta ebe tupu 9 ụtụtụ, edi, ke akpanikọ enye gị ngụgụ obi unu na onye gị na-atụsi anya ike.
Nwere a hearty nri ụtụtụ, elele oké osimiri ọdụm si na dị ka ụbọchị na-aga n'ihu na-aga Chrizaan 39 n'ihi na ụfọdụ shopping. Iji mee ka ụbọchị a obere ihe na-akpali akpali, ị nwekwara ike ile a USB n'obere ụgbọala si akụ Azụ si ụgbọ mmiri ahụ dọ ka Union Square.
4. A agba ịnyịnya ígwè site na Bay Area
Ọ bụrụ na ọ bụ a ọdịda ụbọchị, -aga n'ihi na a agba ịnyịnya ígwè na SF Bay Area. Ihe niile ị ga-ga-enwe a aka nke romance; ka ọ bụrụ mmadụ na agba, ikuku ma ọ bụ ndị leafy na-esi isi.
5. -Aga n'ihi na a pụrụ iche nkiri ụbọchị
Kama ịga n'ihi na a mgbe nile nkiri ụbọchị, isi Castro Theater, a na-eme ememe nkiri n'obí na otu n'ime ndị kasị ewu ewu akụkọ ihe mere eme akara ke San Francisco. Ndị ọzọ karịa mba repertory fim na ihe nkiri na-eme ememme, ọ na-nkebi a nso nke ihe omume pụrụ iche.
6. -Anọ awa ole na ole Forbes Island
Ọ dị nnọọ ike inwe ihe ihunanya karịa nke a; gaa na Forbes Island na gị hụrụ n'anya na ị ga-enwe ụfọdụ oké post ụbọchị echeta.
Jụọ nwunye gị ma ọ bụ nwa agbọghọ enyi na-eme ka a jaket na ya dị ka ikuku bụ mgbe ezigbo oyi na-atụ ebe a. Ọ bụrụ na ị na-echefu na-echetara ya, echegbula; àjà gị jaket ma ọ bụ uwe bụ nke ochie, ma n'ezie ụtọ n'ụzọ nke na-eme ka ndị inyom na-eche a hụrụ n'anya.
7. Atụmatụ a na-ekpo ọkụ ikuku balloon na-agba ịnyịnya
Àmà anyanwụ dara na San Francisco si a na-ekpo ọkụ ikuku balloon; gị hụrụ n'anya ga-enyerịrị masịrị gị adventurous oke. Nke a bụ a zuru okè mkpakọrịta nwoke na nwaanyị echiche maka ememe ndị pụrụ iche. Kwụsị outing na a oké nri na a Champagne tost.
8. A njem iji Crissy Ubi
Crissy Field ga-enye gị dị iche iche ohere na-atụgharị a nkịtị outing n'ime a ihunanya ụbọchị. The ebe, nke mgbe eji na-enwe a US Army airfield, ugbu a webata Golden Gate National Recreation Area.
Na Crissy Ubi, ị nwere ike ofufe a egbe, nwere a iko kọfị na a dị nso Cafe, ma ọ bụ nanị na-eji ụfọdụ jụụ awa na onye gị na-ele ndị ahụ ji nwayọọ n'iyi ebili mmiri na breathtaking ala gbara osimiri okirikiri ebe ndị mara mma.
9. -Aga n'ihi na a ruola ije
Nke a nwere ike iyi ihe na-a nnọọ mfe ga mkpakọrịta nwoke na nwaanyị echiche, ma mgbe ị nọ na San Francisco ruola ije bụ n'ezie a ga-agbalị na-akpa nhọrọ. Obodo bụ n'ụlọ ka ọtụtụ pụrụ iche ma mara stairways; ọtụtụ n'ime ndị a stairways na-emi odude remotely na dị ka a n'ihi inwe ezigbo ịhụnanya nwoke na nwaanyị backdrops. Abụọ SF stairways na-eme ka oké mkpakọrịta nwoke na nwaanyị tụrụ bụ Lyon Street Nzọụkwụ, na 16 Avenue Ngidi Steps.
Ndị a bụ ndị dị nnọọ itoolu ụbọchị ndị nọ San Francisco ekwesịghị ịhapụ aga. Gịnị bụ oké ihe ha bụ na ị ga-adịghị mkpa na-emefu ọtụtụ puku dollar ọ bụla nke ụbọchị ndị a, ma ka ị ga-esi na-emefu ụfọdụ kwesịrị ncheta na omiiko oge na onye gị na.